Amava okwenene enkcubeko yaseMacedonian
Kriva Palanka, Municipality of Kriva Palanka, UMntla Makedoni
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguOlivera
Indlu enqabileyo yokufumana ibekwe kwinduli kwiiNtaba ze-Osogovo eKriva Palanka, eMakedoniya. Le ndlu yosapho ayinikezeli kuphela indawo yokuhlala engalibalekiyo, iimbono ezintle zeentaba kunye neegadi zendalo ezahlukahlukeneyo, kodwa kunye namava atyebileyo enkcubeko! Eli ayilokhaya elitofotofo, kodwa libonelela ngendawo yokuhlala eyiyo.
Le yindawo ekhethekileyo kuba yindlu yosapho yokwenyani yaseMacedonian apho iindwendwe ziphila khona iphupha lokuhamba kwemveli kunye nokwenyani. Indlu ijikelezwe yigadi eyohlukeneyo yebhayoloji eneentlobo ezingaphezu kwe-125 ezahlukeneyo zeziqhamo, imifuno, imithi kunye nemifuno. Abanini bavelisa uninzi lokutya kwabo kwemifuno kwizitiya ezingqonge indlu, benika ithuba lokuba iindwendwe zibone ulimo lokwenyani. Ingaphakathi lendlu libonisa ingaphakathi langoku elinegumbi lokuhlambela eligcweleyo, amandla elanga kunye negumbi lokulala elitofotofo.
IKriva Palanka yidolophu encinci yeentaba kufutshane nemida yaseSerbia naseBulgaria. Eli khaya losapho lithe cwaka likwintliziyo yendawo efudumeleyo enenkcubeko yaseMacedonia kunye nezithethe ezinomdla. Le ndawo inelali ivakale ngeembono ezimangalisayo zentaba. Ibekwe kufutshane ne-Saint Joakim Osogovski Monastery edumileyo eyiperile phakathi kweemonki zaseBalkan.
Umbuki zindwendwe ngu- Olivera
Umnini wendlu uhlala kwaye usebenza e-USA kwaye uyingcali yezoqoqosho ehloniphekileyo. Abazali bakhe bangabamkeli bendlu. Iindwendwe ziya kunikwa ukhetho lokuba ngaba zingathanda ukushiyeka zodwa endlwini okanye zingathanda ukuba umniniyo ahlale kwigumbi elikumgangatho wesibini ngexesha lokuhlala kwazo. Iindwendwe ziyakubonelelwa ngesidlo sakusasa esincedisayo saseMacedonian esiphekwa sisitsha qho kusasa ngumbuki zindwendwe.
Umnini wendlu uhlala kwaye usebenza e-USA kwaye uyingcali yezoqoqosho ehloniphekileyo. Abazali bakhe bangabamkeli bendlu. Iindwendwe ziya kunikwa ukhetho lokuba ngaba zingathanda u…